8 May , 2009 — Dilip Acharya म नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न विदेश जाने केहि विद्यार्थिहरुको चयन गर्ने काममा खटिएको थिएँ । मेरो अगाडि यौटा समृद्ध परिवारको जस्तो देखिने १४-१५ बर्षको केटा थियो ।
दूर्जेय Says:	8 May , 2009 at 5:08 pm अनी त्यस्तो स्कूलिङ भए पछी के गरोस बिचरा। नेपाली भाषाको हाल पनि त्यस्तै छ ल। धन्न बुद्ध ईन्डिया को हो भनेन छ शायद ईण्डियन मास्टर रहेन छ बिचराको नत्र के बेर। हालको वास्तविक चित्रण।
कृष्णपक्ष उज्यालोको खोजिमा Says:	8 May , 2009 at 8:09 pm हो वास्तविकता यही हो,यसरी नै विस्तारै अलबर्टको पीढीले बिस्थापित गर्दैछ हामीलाई, र प्रतिनिधित्व गर्दैछ नेपालको !
शेखर के सी Says:	9 May , 2009 at 8:50 am अबको पिडीहरु यस्तै नहोलान् भन्न सकिदैन। त्यसले देशकै अस्तित्व धरापमा पार्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।
आकार Says:	9 May , 2009 at 11:04 am अत्यन्तै सटिक र एकदमै मार्मिक !
बेदनाथ पुलामी ( उमेश ) Says:	9 May , 2009 at 5:01 pm परिवर्तित नेपाली को जीवन शैली नि हजूर …………… उ काहा गलत छ र ? समाज , समय र हामीले लिएको एजुकेसन को इफ्फेक्ट हो नि !
Prabesh Poudel Says:	10 May , 2009 at 2:19 am सबै काम यस्तो गर्दोरहेछ अनि के थाहा पाओस् त्यसले नेपली मौलिकता ? तर एफएममध्ये रेडियो सगरमाथा चैँ एकदम राम्रो लाग्छ है दिलीप दाइ मलाई !! नेपालीबाहेक कुनै भाषा प्रयोग हुँदैन अनि एकदम बौद्धिक कार्यक्रम हुन्छन् धेरैजसो !!
सिकारु Says:	10 May , 2009 at 6:36 am अब अध्यापन नै यस्तै भएपछि अनुशरण पनि त त्यस्तै हुनेनै भयो । बर्तमानमा लघुकथा भएपनि यो कथा दिर्घकालिन तितो सत्य भएर उदाउन नसक्ला भन्न सकिदैन ।
cheeju Says:	10 May , 2009 at 9:59 am बिदेशी शिक्षक शिक्षिका द्वारा सन्चालित राम्रो बोर्डिङ स्कुलमा आफ्नो बच्चा पढाएको छु भनेर गर्व गर्ने हामी सोझा साझा नेपाली हरुलाई एउटा गतिलो झापड छ यो लघुकथा ।आफ्ना बाल-बच्चाहरु लाई के पढाउनु र खै यस्तो स्कुलमा? नतिजा यस्तो आएपछि, होईन र ?धन्यबाद दिलिपजी कथाको लागी
प्रबिण थापा Says:	12 May , 2009 at 5:09 pm sundar prastuti dilip ji! man chhoyo.
दीपक जडित Says:	12 May , 2009 at 11:16 pm माथी आकारजीकै कुरामा सहमत – धेरैले वास्तै नगरेको तर गहिरो असर पारिसकेको विषमा लेख्नुभएको छ यो कथा । ( पढेको पहिले नै हो बल्ल कमेण्ट लेख्दैछु ! अल्छे भा’छु म । )
Kamaladi Says:	13 May , 2009 at 1:40 pm परिवर्तन प्रकृतिको नियम हो, कुनै कुरा स्थाहि हुंदैन । तर अनावाश्यक परिवर्तन को कारक र परिवर्तन को स्वरुप भने शायद सच्चाउन मिल्ला कि !
Anonymous Says:	14 May , 2009 at 3:24 am thanks for the blog….
Luna Says:	20 June , 2009 at 1:42 am ब्यङ्यात्मक शैली मा लेखिएको यो कथाको मर्म ले मार्मिक सन्देश बोकेको छ ।
Hari Says:	17 September , 2009 at 2:45 pm के थाहा पाओस् त्यसले नेपली मौलिकता ?